द भोइस अफ नेपालकि कोच आस्था राउतले कसलाई प्रहरीमा केस हाल्दै छिन त ? – Hamrosandesh.com
द भोइस अफ नेपालकि कोच आस्था राउतले कसलाई प्रहरीमा केस हाल्दै छिन त ?
आस्था राउत हिट गीत दिने नेपाली गायीका हुन् । अहिले उनी एक रियालिटि शो मा निर्णायकको भूमिकामा छन् । रियालिटी शो भ्वाइस अफ नेपालमा निर्णायकको भूमिकामा छन् ।
भर्खरै उनको दोस्रो एल्बम ‘आधार भाग २’ सार्वजनिक भएको छ । उनको सबैभन्दा हिट गीत हो चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा । उनको दोस्रो एल्बम आधार भाग २ म्यूजिक नेपालले उत्पादन गरेको एल्बम बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।
हास्य जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य९मह०, संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायक राजु लामा, आस्थाका बाबु हरिबहादुर राउत र आमा साबित्री राउतलगायतले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । आस्थाका सांगीतिक गुरु हुन् संगीतकार सुरेश अधिकारी ।
उनले आफ्नो जन्म नै गीत संगीतको लागि भएको हो की भन्ने लाग्छ । उनले तीन वर्षको उमेर देखि नै विभिन्न प्रतियोगीतामा भाग लिएको बताउँछिन् । उनले चौबन्दी र झुम्के बुलाकी गीत हिट भएर प्रतियोगीतामा कोच बनेको भनेर गरेको कमेन्ट प्रति उनको निकै चित्त दुखाई छ ।
उनले त्यसो भन्नेहरुलाई कडा जवाफ दिएकी छन् । उनले आफ्नो बारेमा सबै कुरा बुझेर मात्र कमेन्ट गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन् म पनि तपाईहरुकै आमा दिदी बहिनीको प्रतिनिधित्व गरेकी छु, स्टडी नै नगरी तपाईहरु जस्ताले जे पायो त्यही भन्नु राम्रो होइन । उनले सबैलाई सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरिन् ।
उनले आफु बालापन देखि नै गीत संगीतमा लागेको बताउँदै आफ्ना बारेमा म्युजिक नेपालमा गएर पनि बुझ्न आग्रह गरिन् । आफ्नो आधार भाग २ पनि त्यतीकै नआएको बताइन् । उनले यो एल्बम निकाल्न पनि दुई वर्ष समय दिएको बताइन् ।
भ्वाइस अफ नेपालमा जज भएर आएपछि आफुलाई त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको उनको गुनासो छ । उनले सो कार्यक्रममा कुनै लिखित स्कृप्ट नभएको बताइन् । उनले भ्वाइस अफ नेपालमा पनि निकै मेहनत गरेको बताएकी छन् ।